सन्दीपले बिगबाश लिगमा शनिबार पहिलो खेल खेल्दै – Sandesh Press
सन्दीपले बिगबाश लिगमा शनिबार पहिलो खेल खेल्दै
January 1, 2021 241
काठमाडौँ । नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले अस्ट्रेलियामा जारीबिग बाश लिगमा यस यामको पहिलो खेल शनिबार खेल्ने भएका छन् । चौध दिनको अनिवार्य क्वारेन्टाइनको समय सकिएपछि उनले पहिलो खेल उनको पुरानो क्लब मेलवर्न स्टार्सविरुद्ध खेल्न लागेका हुन् ।
लामिछानेले मेलवर्न स्टार्सविरुद्धको खेल खेल्ने पक्का होबार्ट हुरीक्यान्सले टिममा समावेश गरेर जानकारी दिएको छ । होबार्ट हुरिकेन्समा आबद्ध लामिछानेले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण यस यामका शुरुआतका छ खेल गुमाएका थिए ।
नेपालमै छँदै कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका कारण लामिछानेलाई बिगबास लिग खेल्नका लागि अष्ट्रेलिया जान ढिला भएको थियो । अस्ट्रेलिया पुगेपछि पनि अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने भएका कारण उनी प्रारम्भका ६ खेल खेल्नबाट वञ्चित भएको उनका व्यवस्थापक रमन शिवाकोटीले जानकारी दिए उनी बुधबार क्वारेन्टाइन मुक्त भएका हुन् । उनी सम्मिलित टोली होबार्ट सातौँ खेल खेल्ने तयारीमा छ । हालसम्म खेलेका छ खेलमा होबार्ट चारमा जित तथा दुई खेलमा हारका साथ आठ टोली सम्मिलित बिगबासको तेस्रो स्थानमा रहेको छ ।
बिगबास खेल्न लामिछाने गत मङ्सिर ३० गते अष्ट्रेलिया गएका हुन् । क्वारेन्टाइन अवधि सकिएपछि उनी नियमित अभ्यासमा जुटेका छन् । लामिछानेले खेल्ने शनिबारको खेल नेपाली समय अनुसार बिहान पौने १२ बजे शुरू हुने बताइएको छ । उनले तेस्रो पटक बिगबास लिग खेल्न लागेका हुन् ।
लामिछानेले यसअघि दुई यामको बिगबास मेलवर्न स्टार्सबाट खेलेका थिए । ती दुई याममा उनले कूल २० खेल खेल्दै २६ विकेट लिएका छन् । राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने क्रममा लामिछाने कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएपछि केही समय आराम गर्दै त्यसबाट मुक्त भएपछि मात्र उनी अष्ट्रेलिया गएका थिए ।
Prevपरिचय नखुलेको यी १ जना मानिसको बाटोमा निधन
Nextआन्दोलनकै क्रममा अस्ताए नारायण रायः पैसा ल्याउँछु भनेका थिए तर घरमा लास उनको लास गयो
कोरोना खोप लगाएकी एक स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु
धरानका व्यवसायी कृष्णकुमार अग्रवालको कार चारकोशे जङ्गलमा दुर्घटना
धन लाभ हुनुअघि मिल्छन् यस्ता संकेत ॐ लेखी हेर्नुहोस (3304)
यहा सम्म आइसकेपछी नपढी तल नसार्नुहोला,नत्र ठुलो पछुतो हुनेछ (3085)
अकस्मात सुनको मूल्य मा किन आयो यस्तो परिवर्तन ? (1903)
घरमा श्रीमती हुँदा-हुँदै परस्त्रीलाई श्रीमती भन्न सक्ने केटाहरु प्रती घृ’णा लाग्छ”! (1831)
स्कूल बसवाट खसेर ६ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको घटनास्थलमै मृत्यु (1788)
हार्दिक बधाई !! नेपाली सेनाको पहिलो महिला गुल्मपति ‘मेजर सृष्टी खड्का’ (1405)
दामोदरलाइ पनि लाग्यो कोरोनाले, निकै प्रयास गर्दा पनि सकेनन डाक्टरले बचाउन